TinyLetter: No Frills Wargeysyada Email | Martech Zone
TinyLetter: No Frills Wargeysyada Email
Arbacada, Janaayo 23, 2013 Jimco, Juun 19, 2015 Douglas Karr
Gal gal adeeg bixiye kasta oo weyn oo emayl maalmahan ah, haddii aadan farsamo ahaan aqoon u lahayn, waxaad u badan tahay inaad uga gudubto liiska cuntada, astaamaha, shaqeynta, jawaabta iyo warbixinta. Mararka qaar sixirka tikniyoolajiyadda ayaa ah marka qof caqli lihi uu dib uga fikiro hannaanka oo uu ugu kaliyoo dalabka kaliya waxyaabaha daruuriga ah.
Waraaqda Yar waa adeeg noocaas ah.
Naqshadeyso boggaaga qoritaanka. Foomka isdiiwaangalinta ayaa ah mid xarrago leh oo sahlan in wax laga beddelo, sidaa darteed waxaad uga dhigi kartaa TinyLetter mid kuu gaar ah.
Samee oo soo dir TinyLetter-kaaga. Ma jiraan wax arrimo ah oo lagu dhibaateeyo. Hal guji, oo waad baxaysaa. Waxaan xitaa ku hagaajin doonnaa cabbirka xarfaha iyo dhererka xarriiq ee aaladaha moobaylka si warqaddaadu had iyo jeer u muuqato mid fiican.
U jawaab akhristayaashaada.
Eeg cidda aqrinaysa joornaaladaada, oo sii wad wadahadalka kuwa ka jawaabaya.
Waa intaas! Waxaa jira xaddidaadda 2,000 oo xiriir ee joornaal kasta - sidaas darteed nidaamku runtii wuxuu u dhisan yahay adeegsi shaqsiyeed. Haddii aad ubaahantahay waxbadan, waxaad ubaahantahay inaad kor usoco! TinyLetter waxaa iska leh Mailchimp.
Tags: Email Marketingwargeysyadayar yare
Sendgine: Abaabul Tareennadaada Fikirka